Xukuumada DDSI Oo Deeq iyo Caawimo Gaadhsiisay Bisle iyo Fadhato - Cakaara News
Xukuumada DDSI Oo Deeq iyo Caawimo Gaadhsiisay Bisle iyo Fadhato
Dire-Dawa(CN) Sabti, 19ka September 2015. Xukuumada DDSI oo uu horkacayo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka Hawlaha guud iyo Horumarinta Magaalooyinka mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar. Wasiirka xafiiska kahortaga iyo u diyaargarawga masiibooyinka DDSI mudane Maxamed Daahir, kusimaha xafiiska caafimaadka DDSI ahna kuxigeenka xafiiska mudane Cabdifataax Siciid, ayaa galabta deeq isugu jirta bariis, buskud, sonkor iyo waliba raashinka caawimada ah oo kakooban qamadi iyo saliid gaadhsiiyay shacab reer guuraa ah oo lagasoo raray baadiyaha si kumeelgaadh ahna loo dajiyay qabaleeyada Bisle iyo Fadhato.
kajawaabida degdega ah ee baahidan xukuumadu shacabka gaadhsiisay raashimada deeqda iyo caawimada kakooban ayaa kutimid kadib markii bulshadani wayday roobkii gu'ga iyadoo nolosha bulshada miyigu kuxidhan tahay roob.
Madaxwaynaha oo halkaa kulahadlay shacabka ayaa ugu horayn ubaryay ilaahay in roob degdeg ah siiyo. isagoo madaxwaynuhu shacabka usheegay in xukuumadani tahay mid udhaga-nugul shacabkeeda oo goor kasta, goob kasta iyo xili walbaba garabtaagan.
Hadaba shacabkii goobtaas ayaa aad umahadiyay kaalmada xukuumada islamarkaana si niyadsan kaga gudoomay.